Galeshwor News::यि हुन गाउँपालिकालाई ४४ लाख सहयोग गर्ने:अध्यक्ष भण्डारी - Galeshwor News
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०७५, बिहीबार गलेश्वर न्युज
म्याग्दी, १७ साउन ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भब बहादुर भण्डारीले समृद्ध रघुगंगा गाउँपालिका बनाउनको लागी आफुले व्यक्तिगत रुपमा ४४ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । आफु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछी एक बर्षको अवधिमा उनले ४४ लाख २ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यो रकम मध्ये उनले बढी रकम पूर्वाधार निमार्णमा नै खर्च गरेका छन् ।
चुनाव अघाडी आफुले जनाताको माज गरेका बाचा पुरा गर्नका लागी आफुले व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरि जनाताको चाहाना पुरा गरेको उनले भनाई छ । १० बर्ष रोजगारीको शिलशिलामा खाडी मुलुकमा दिन बिताएका भण्डारी स्वदेश आएर निमार्ण व्यवसायीको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । उनले समृद्ध गाउँपालिका निमार्णको लागी बढी खर्च सडक निमार्णमा नै खर्च गरेका छन् । गाउँपािलको १ न वडाको सेउलेबाट बाउनस्वारा सम्मको २. ५ किलोमिटर सडकको लागी ५० हजार, गाउँपालिकाकको ४ न वडा दग्नामको चिमखोला कुईनेमंगले जोड्नेदोभानको भिरको सडकमा १० लाख, दग्नामको कान्छी गाउँ सम्म सडक सञ्जालले जोड्नका लागी ५५ हजार, वडा न. ६ पाखापानीको वडा कार्यालयबाट औँला बस्ती सम्म पुग्ने ३ किलो मिटर सडकका लागी ३ लाख २७ हजार, त्यस्तै कालावाङ चोवुबाट उमीखर्क सम्म जोड्ने सडकका लागी १ लाख ५१ हजार, गाउँपालिका वडा नं ८ कुईनेमंगले नक्कल डाडाँ देखी घ्यासीखर्क सडक र्ममतका लागी ५६ हजार, ७ न. चिमदखोला ठाक्कल डाडाँ मर्मतका लागी २ लाख २३ हजार रुपैयाँ उनले सडक सञ्जालको लागी खर्च गरेको बताउछन् ।
त्यस्तै उनले २ न वडाको माचखर्कमा रहेको बालशिक्षा भवन मर्मतका लागी ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ, रिसिनचौतारी बनाखी खानेपानी मर्मतका लागी ५ हजार, धुपीचौर दलित बस्तीलाई खानेपानीको लागी १ लाख, ३ न. वडाको रानीपौवा युवा क्लबको खेल मैदान निमार्णका लागी २५ हजार,अक्षता युवा क्लबको खेल मैदान निमार्णको लागी ३४ हजार त्यस्तै ४ न. वडामा भुमेपुजाका लागी २५ हजार, दग्नामको एकता युवा क्लबको खेल मैदान निमार्ण गर्नका लागी ५० हजार, त्यस्तै ५ न. वडाको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल टोड्के मन्दिरमा रहेको गाईगोठलाई व्यवस्थित गर्नका लागी ५० हजार, त्यस्तै गौडमुनी खेल मैदान निमार्णका लागी २ लाख ८४ हजार, पात्लेखर्क खेल मैदान निमार्णका लागी ४५ हजार, चिमखोलाको तारोखेल मैदान निमार्णका लागी ४२ हजार, पात्लेखर्क सामुदायिक भवनको हुरीले उडाएको छानो छाउनका लागी ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको उनको भनाई छ । ‘मैले चुनाव अघि जनता संग गरेका बाचा गाउँपालिकाको बजेटले मात्र पुरा गर्न नसकीने भएपछी व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेको हुँ ।’ भण्डारीले भने । म विदेशी भुमीका गएर दुःख समेत पाएको मान्छे हो । अहिले मेरो घरपरिवार र छोराछोरीलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याईदिएको छु मलाई पैसा कमाउला भन्ने छैन ।
जनताले गाउँपालिको विकासका लागी मलाई जिताएका हुुन् म जनताको काममा नै गर्ने कुनै लोभ छैन । ‘मैले सरकारबाट पाउने सुविधा एक बर्षको पाएको छु त्यो पैसाले एउटा अक्षकोष स्थापना गर्ने छु र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका गरिब र बिपन्न परिवारका बालबालीकाको पढाईका लागी खर्च गर्नेछु ।’ अध्यक्षले भने । अबको ४ बर्ष सम्म सम्पूर्ण समय जनताको सेवामा नै लाग्ने छु ।
जनताको चाहाना अनुसार एउटा नमुना र समृद्ध गाउँपालिका बनाउने भण्डारीको चाहाना रहेको बताउछन् । लामो समय निमार्ण व्यवसायी भएर काम गरेको भण्डारीले आफुले राम्रो शिक्षा पाउन नसकेको बताउदै आफुले पाउने सुविधाको रकम सम्पूर्ण गरिब परिकारका छोराछोरीका लागी खर्च गर्ने बताएका छन् । अब मैले जति कमाउछु आधा परिवारका लागी र आधा गरिब जनताका लागी खर्च गर्छु उनले भने । अबका दिनमा पनी जनताको सेवामा नै लागी रहने उनको भनाई छ । मैले सरकारको एक जनप्रतिनिधि एक बिद्यार्थी अभियानमा भर्ना गरेका दुई जना बालबालिकाको लागी पनी उच्च शिक्षाका लागी अक्षकोष स्थापना गरिसकेको र उनीहरुले पढ्ने बेला सम्मको सम्पूर्ण खर्च आफुले गर्ने उनले बताए । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिका नकारात्क कुराहरु आउदै गर्दा भण्डारीले भने जनताको चाहाना र माग पुरा गर्नका लागी आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा नै लाखौँ खर्च गरेर उदाहरण बनेका छन् ।